Milan waxaa lagu tiriyaa magaalooyinka ugu wanaagsan Yurub si ay wax uga iibsadaan iyada oo ay ugu wacan tahay in loo tixgeliyo inay tahay caasimadda moodada. Si kastaba ha ahaatee, Milan ma aha oo kaliya ku saabsan Fashion The iyo fashion-jidadka sare ee degaanka Duomo ah. Waxaa jira meelo kale oo badan si ay u sahamiyaan, laga bilaabo dukaamada farshaxanka ee degmada Brera ilaa saameynta xiisaha leh ee aagga Navigli. Milan runtii waa Jannada dukaan ah. Haddii aad soo jiitay waxa by, waxaad u safri kartaa Milan si fudud tareen Rome ka, Venice, iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee Europe.
goobaha kale ee caanka ah waxaa ka mid ah Bahnhofstrasse ah, Europaallee, iyo degaanka ku hareereysan Langstrasse, gaar ahaan haddii aad rabto in aad hubi Swiss iyo design magaalooyinka. Helitaanka waxaa tareen waa u fududahay ka Berlin, Munich, Vienna, iyo magaalooyin kale oo waawayn oo yurub ah.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-europe-shopping-train%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)